Ku Taqasuska Maamulka iyo Maareynta
Taqasuska Maamulka iyo Maareynta wuxuu ardayga u diyaariyaa qorsheenta, abaabulka, toosinta iyo xakameenta howlaha shirkadaha, waxaa ka loo ardayga loo diyaarinayaa barashada qaababka maamulka, sida loola dhaqmo shaqaalaha iyo maamulkooda, xisaabaadka, hababka loo kobciyo ganacsiga iwm.
Maadooyinka lagu qaato taqasuska maamulka iyo maareynta waxaa ka mid ah:
Arday noocee barta taqasuska maamulka & maareynta?
Ku fiican hogaaminta
Jecel inuu dhiirigaliyo dadka
Ku fiican abaabulida
Jagooyinka uu qaban karo ardayga dhameeya taqasuska maamulka & maareynta:
Maamule xafiiska shaqada & shaqaalaha
Tayada Tacliinta Sare
Ka hadalka qarashka, awoodista iyo qiimaha tacliin sare waa mawduuc uu hadalhaayo qoys walba, qoraalkaan wuxuu qiimayn doonaa Tayada Tacliinta Sare.
Kordhinta tirada ardayda jaamacad ka qalin-jabisa iyo bixinta darajo waxbarasho micno badan ma sameenayso hadii ardayga uusan baraneyn aqoon mustaqbal anfici doonta. Maamulada Jaamacaddaha sanadadii la soo dhaafay waxay xooga sarayeen badinta tirada ardayda aada jaamacaddooda, intii xooga la saari lahaa hormarinta tayada waxbarasho ee la siiyo ardayga markuu ka mid noqdo ardayda jaamacadda.
Jaamcaddaha dalka waxay iska dhaga-tireen calaamadaha muujinaaya hoos u dhaca waxbarasho ee ardayda aado jaamacaddaha 5 sano ee la soo dhaafay, waana hoos u dhac aqooneed oo sii socon doona sanadaha soo socda. Arimaha walaaca leh waxaa ka mid ah:
1) Maanta ardayga jaamacaddeed wuxuu u muuqdaa inuu waqti yar galiyo shaqada koorsada sida qorida, tababarada taqasuskiisa iyo qiimayn aqoontiisa, cadeymaha ku saabsan awooda ardayga oo hoos u dhacday waxay muujinaayaan in ardayda jaamacaddaha dalka ay sameeyaan in ka yar shaqada ay sameeyaan ardayda jaamacaddaha Kenya iyo Uganda.
2) Shirkadaha iyo hay’adaha waxay ka cabanayaan ardayda ka soo qalin-jabisay jaamacaddaha oo ay shaqaaleeyaan inay ku liitaan xirfadaha aasaasiga ah, sida qorida warbixinada, xalinta xaaladaha soo darsa iyo qiimeynta arimaha u baahan xal, arimahaas oo inta badan maamulka iyo macalimiinta jaamacaddaha sheegaan in xirfadahaas lagu baro ardayga jaamacadda inta uu joogo.
3) Kumanaan arday ee ka soo baxa dugsiyada sare waxay imaadaan jaamacadda ayagoo aan u diyaarsanayn tacliin sare, taasoo abuurta halis ah in hoos loo dhigo tayada tacliinta la siinaayo ardayga, ayadoo la fiirinaayo hadafka maamulka jaamacadda oo ah in tiro badan oo arday ah ay qalin-jabiyaan.
4) Waxaa lagu qiyaasaa 70% maclimiinta jaamacaddaha laga shaqaleysiiyaa ayagoon la marsiin hanaanka shaqalaysiinta macalin jaaamacaddeed oo u baahan hubin aqooneed iyo qiimeyn waayo aragnimo.
5) Dowladaha aduunka waxay dhaqaale ku bixiyaan helida tacliin sare oo tayo leh. Dowlada Federalka waa inay ku bixisaa dhaqaale taageero oo leh qaab deeq waxbarasho, deyn waxbarasho, iyo lacagta xirfad korarsi waxbarasho.
Qaar ka mid ah maamulayaasha jaamacaddaha waxay dadaal wayn ugu jiraan horumarinta tayada waxbarista, halka maamulayaasha qaar ku qanacsan yihiin caqabadahaan heesto tacliinta sare, ayagoo aminsan in aysan ciladahaan ka jirin xarumaha jaamacaddooda, eedana dusha ka saaraya dugsiyada sare oo aan ardayga soo diyaarin intuusan jaamacad gaarin.
Hadii aad qabtid su’aal ama ay jirto wax fikir ah fadlan halkaan noogu soo gudbi.
Ku Bayaaninta Cilmi-baaris Dhib jira
Bayaaninta dhib jira waa guudmar kooban oo lagu sameeyo dhibaatooyinka iyo arimaha jira ee aad cilmi-baaristaada ugu jawaabi doontid. Waa sharaxaada dhib ku baahsan qayb gaar ah keentana in cilmi-baaraha uu ku hamiyo inuu mowduuca si qoto-dheer u daraaseeyo, taas oo gaarsiisa fahamka iyo xalinta dhibka jira.
Cilmi-baaraha waa inuu ka dhaadhiciyaa akhristaha in muhiim tahay in la sameeyo daraasadaan. Waa inuu akhristaha dareemaa bulshada ama mid ka mid ah hay’adaha dadweynaha uu dhib heestaa u baahan in loo kuurgalo. Waa in cilmi-baaraha keenaa cadeyn in dhibka uu yahay mid halis ah, una baahan yahay baaritan dheeraad ah, oo aad ku qancisaa akhristaha dhibka in lagu xalinkaro habka aad dooratay.
Su’aalaha u baahan inaad ka jawaabtid waa:
Waa maxay dhibka ugu weyn?
Waa maxay dadka iyo sambalka ay dhibaatadaan sameesay?
Waa maxay nooca daraasada ay noqon doonto?
Waa maxay habka cilmi-baarista la isticmaali doono?
Waa maxay nooca macluumaad la aruurin doono?
Waa maxay natiijooyinka la filankaro?
Bayaaninta dhib jira waa in akhristaha aad tustaa:
Dhibaatada jirta waa mid jawaab loogu heli karo macluumaad aruurin iyo baaritaan.
Cilmi-baaris noocaan ah aan horay loo sameyn, waxna ku kordhinaysa aqoonta.
Wax ku soo kordhinaysa bulsha ama xirtafa uu mowduuca quseeyo.
Xarunta Cilmi-baarista ee Jaamacadda
Dowlad waa tiro kooban ama koox ka mid ah dad wada degan oo maamusha bulshadaas. Dowlad waxay dajisaa oo maamushaa siyaasadda guud iyo hirgalinta awoodaheeda, waxay kaloo dowlad leedahay madaxbanaani dinacyada siyaasada, socdaalka, hay’adaha iyo sharciyada dhulkaas uu lee yahay.
Dowlad mas’uliyadeeda koobaad waa in ay noocyada kala duwan ee bulshada helaan deganaansho iyo xal u helida baahiyaha muwaadinka ayadoo raceysa dastuurka. Dowlad waa hagaha bulsho, waxay soo bandhigtaa xeerar u fududeeyo bulshadaas inay jihada saxda ah aado.
Dowlad waxay nidaamisaa habka ay bulsho wada degan iskula dhaqmaan iyo sidee bulshadaas ula dhaqanto bulshooyinka kale ee dariska la ah, waxay kale oo dowlad leedahay awood ay go’aano ugu gaarto bulshada ee matasho.
Inkastoo qoraalka kor ku xusan uu naga caawiyay inaan si cilmiyan ah u fahamno waxa ay dowlad tahay, hadii aan soo koobno dowlad waa nidaam ama hay’ado howl haya, waxaa kaloo dowlad lagu timaami karaa tiro dad ah oo bulshada u dhiibatay maamulka arimahooda, ugu dambeen dowlad waxay awood u leedahay inay dajiso xeerarka bulsho ku dhaqanto dhexdeeda iyo bulshooyinka dariska la ah.
Sida loo qoro Ujeeddooyinka Cilmi-Baaris
Ujeeddooyinka cilmi-baaris waa himilooyinka aad u dajisay daraasadda, aana rabto inaad gaarto intaad ku gudo jirto daraasadda. Ujeedada cilmi-baarista waxay wargilsaa akhristaha waxa aad rabid inaad baarto iyo intaad qorsheenaysid inaad mowduuca u gudo gasho. Ujeedada cimi-baarista waxay u sheegtaa akhristaha baaxadda iyo heerka daraasadda. Qodobka ugu muhiimsan in la tixgeliyo markii la sameenayo ujeedada cilmi-baarista waa bayaan ahaansho.
Calaamadaha looga bahan yahay ujeeddooyinka cilmi-baarista:
bayaan ahaansho waa waxa ugu weyn ee xoogga lagu saaro ujeedooyinka cilmi-baarista. Sida aad u qorto ujeedada cilmi-baarista waxay wax badan ka sheegtaa daraasaddaada.
jumlo kasto oo gaaban kuna jirta ujeedada cilmi-baarista waa inuu akhristaha dareemaa inay tahay weedh dhammeystiran.
Si cad loo qeexay
Ujeedada cilmi-baarista waa inay si toos ah u qeexdaa waxa, sida, goorta iyo meesha daraasadda laga sameenayo.
Tusmayn waxyaalaha ugu muhiimsan ee daraasadda
Noocyada ujeeddooyinka cilmi-baarista
Waxaa jira laba nooc oo ujeedada cilmi-baarista oo ay daraasadkasta leedahay; ujeedada koowaad ugana weyn iyo ujeedada labaad ee cilmi-baarista. Ujeedada ugu weyn ama ujeedada koowaad waxay kugu hagaysaa cilmi-baarista aad rabtid inaad fuliso. Ujeedada labaad waa hadaf mar walba daba socda ujeedada weyn ee cilmi-baarista.
Qaab Nolaleedka Maxaabista Xabsiga Dhexe ee Muqadisho
Anigoo ah Maxamad cabdi muudey, kana tirsan dufacadii 34-aad ee kuliyada maamulka iyo mareenta Jamacadda Badweynta Hindiya, waxaan idiin soo bandhigayaa xog-uruurin aan ka soo sameeyay xabsiga dhexe ee Mugadisho.
Xog-uruurintaan waxaa iga saaciday intii aan sameenayay kormeerahayga macalin Cismaan yuusuf Raage
Xog-uruurinteeda waxaan xooga ku saaray qaab nololeedka maxabiista xabisiga dhexe ee mugadisho .
Waxa igu dhaliyay inaan sameeyo xog-uruurintaan waxey aheyd markii an arkay kor u kaca tirada maxaabiista xabisga dhexe ee Magadishu.
Habka xog-uruurintaan waxey aheyd su’aalo weydiin sababta aan u doortayna waxay aheyd in ay tahay sida ugu fiican ee an ku heli karay xogta aan u baahnaa,
Intii aan ku gudo jiray xog uruurinta waxaan booqaday xafiiska xeer ilaalinta, xarunta taliska asluubta iyo xabsiga dhexe oo aan ka soo uruuriyay xogteeda .
Dadkii aan wareystay 56.2% waxey ahayeen rag, halka 43.8% ay ahayeen dumar.
Su’aalahii aan weydiyay waxaa ka mid ahaa:
1.Ma loo bahan-yahay in la hor mariyo maamulka iyo sharciyada xabsiga dhexe si loo xakameeyo cadadka maxaabista iyo amaanka xabsiga?
78.8% waxa ay ku jawabeen haa waa loo bahan-yahay in la hor mariyo maamulka iyo sharciyada si loo xakameeyo cadadka iyo amaanka xabsiga halka 21.2% ay ku jawabeen maya looma baahno
2. Ma haystaan maxaabista daryeel fiican oo deegan ah sida caafimaadka, dharka, cunatada, cabitaanka iyo jimicsiga.
75% waxey ku jawabeen haa waxa ay heystaan daryeel fiican, halka 18.8% ay ku jawabeen maya ma heystaan wax daryeel fiican .
3. Maxaabiista buux dhaafisay xabisga dhexe xalinteeda ma tahay tilaabada ugu horeysa ee laga rabo in dowlada ay qaado .
33.8% waxa ayku jawabeen haa waa tilaabada ugu horeyso ee laga rabo in dowlada ay qaado, halka 48.8% ay ku jawabeen maya maha tilaabada ugu horeesa.
Inta aan ku gudo jiray xog-uruurintaan waxaan soo ogaaday
In kooxo kubada cagta ciyaaro ay ka dhisanyahiin xabsiga dhexe
In ay jirto shaqooyin ay qabtaan maxaabiista xirfadlayaasha ah
In takaayooyin yar yar ah ay ka dhisanyahiin xabsiga dhexe
Waxaan talo ku soo jeedin lahaa:
In saro loo qaado daryeelka maxaabista
In maxaabiista loo sameeyo dhaqan-celin buuxda
In xabsi kale laga dhiso magaalada banaankeeda
Wixii su’aal ama fikir ah fadlan hoos ku qor.
Maxamaed Cabdi Muudey